भिडियो « Pariwartan Khabar
दोहोरीबाट चर्चामा आएका चीज गुरुङले गाएको दशै गीत छैन मनमा हर्ष बजारमा आएको छ । उनी संगै चर्चित सर्जक तथा गायक रबिन लामिछाने र गायीका कल्पना सिग्देलको स्वर रहेको छ
मेलिना राई र रुकमान लिम्बूको स्वरमा ‘धेरै माया गर्छु’ सार्वजनिक (भिडियो )
काठमाडौं । पछिल्लो समयकी चर्चित गायिका मेलिना राई र मोडल तथा गायक रुकमान लिम्बूको स्वरमा ‘धेरै माया गर्छु’ बोलको गीत सार्वजनिक भएको छ । गीतको भिडियोमा आफूलाई मनपर्ने प्रेमिकाप्रति कतिसम्म
ईटहरी । नेपाली संगीत आकाशमा माया, प्रेम र बिछोडका गीतले ढाकिएको छ । कुनै बेला थियो कमेडी गीतले पनि बजार तात्ने । अहिले, कमेडी गीतको बजार लाग्नै छाड्यो भन्दा फरक
मेलबर्न बाट कपिलले ल्याए ‘तिमीलाई नै’ (भिडियो)
काठमाडौँ । केहि समयअघि ‘छम छमी’ बोलको म्युजिक भिडियो सार्वजनिक गरेर चर्चा कमाएका गायक कपिल सापकोटाले ‘तिमीलाई नै’ बोलको लिरिकल भिडियो सार्वजनिक गरेका छन् । पप भर्सनको यस गीतमा स्वर,शब्द
गायिका प्रेमकला कुवंर मुस्कान को आवाजमा ‘आत्म हत्या’सार्वजनिक
काठमाडौं । नेपाली लोकगीत संगीतको क्षेत्रमा आफनो आवाजको माध्यमबाट आम लोकपारखी दर्शक तथा स्रोताको मनमा बस्न सफल गायिका प्रेमकला कुवंर मुस्कान को आवाजमा रहेको निकै वेदना समेटिएको गीत ‘आत्म हत्या
काठमाडौँ । गायक राहुल रक्सको आवाजमा रहेको आधुनिक गीत ‘तिमि रिसाउँदा’ सार्वजनिक भएको छ । प्रेम दिवशको अवसर पारेर सार्वजनिक गरिएको गीतको शब्द तथा संगीत सुरज अधिकारी (सुर रक्स)को रहेको
राजेशको निर्देशनमा निर्मलको ‘जुटौं अब’को सार्वजनिक
काठमाडौं । हाल अमेरिकामा बस्दै आएका गायक नेचुरल निर्मलको स्वरमा देशभक्ति भावले ओतप्रोत नयाँ गीत ‘जुटौं अब त उठौं अब त’ को भिडियो दर्शकमाझ आएको छ । निर्मलले यो गीतको
अम्बिका शाक्यको शब्द र किरण कँडेलले संगीतमा ‘जय श्री स्वस्थानी माता’ भजन सार्वजनिक(भिडियो)
काठमाडौं । हरेक बर्ष पुष शुक्ल पूर्णिमादेखि माघ शुक्ल पूर्णिमासम्म नेपाली महिलाहरूले गर्ने श्री स्वस्थानी व्रतको बारेमा लोकप्रिय गायिका प्राश्ना शाक्यले भजन ल्याएकी छिन । अम्बिका शाक्यको शब्द रहेको ‘जय
‘संविधान जोगाउन र मुलुकको विवादलाई सही ट्रयाकमा ल्याउन पनि संसद पूनःस्थापना हुनुपर्छ’ : डा. शर्मा (भिडियो सहित)
अधिवक्ता डा. रुद्र शर्माले राज्यका सर्वोच्च निकाय÷संस्थाहरु एक–आपसमा झगडा र द्वन्द्वमा हुन दुःखद् भएको टिप्पणी गरेका छन् । उनले यही अवस्थाले भोलि मुलुक संविधानले अन्दाज नगरेको ठाउँमा पनि पुग्नसक्ने खतरा
‘संकटकाल लगाएर भएपनि ओली चुनावमा जान्छन्’ : डा. दिक्षित (भिडियो सहित)
नागरिक समाजका अगुवा डा. सुन्दरमणि दिक्षितले देश अहिले ठूलो संकटबाट गुज्रिरहेको भन्दै चिन्ता व्यक्त गरेका छन् । उनले भने,–‘अहिले हामी अत्यन्तै जोखिमपूर्ण अवस्थामा छौं । देशको अवस्था यस्तो छ कि
‘वैशाखमा निर्वाचन हुँदैन्, मंसिरमा निर्वाचन गर्नको लागि डा. दिक्षितको नेतृत्वमा चुनावी सरकार बनाउनुपर्छ’ : डा. सुरेन्द्र केसी (भिडियो सहित)
काठमाडौं । राजनीतिक विश्लेषक डा. सुरेन्द्र केसीले तोकिएकै मितिमा कुनैपनि हालतमा निर्वाचन नहुने भन्दै बरु आगामी मंसिरमा निर्वाचन हुनसक्ने स्पष्ट पारेका छन् । आज (शनिरबार) रिपोर्टर्स क्लब नेपालले आयोजना गरेको